सेक्स पावर बढाउने भियग्रा कस्तो औषधि ? यसको सेवनले नोक्सानी हुन्छ कि हुँदैन ? – aajnepal
HomeRochakसेक्स पावर बढाउने भियग्रा कस्तो औषधि ? यसको सेवनले नोक्सानी हुन्छ कि हुँदैन ?
एजेन्सी ।–औषधि विज्ञानका विभिन्न आविष्कारमध्ये यो पनि लोकप्रिय आविष्कारमा पर्छ। भियग्राले यौन दुर्बलताका कारण चिन्तित एवं हीनताबोधले पीडित व्यक्तिलाई पुरुषत्व फर्काउन मद्दत गर्छ।
यौनांगमा हुने रक्तप्रवाहले यसलाई उत्तेजित अवस्थामा राखिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
जब मानिसको मनमा यौनेच्छा जाग्छ, तब यौनांगमा रगत प्रवाह गर्ने धमनी खुल्ला हुन्छ भने रगत फर्काएर लाने शिरा खुम्चिन्छ। यसको परिणाम स्वरूप यौनांगमा पर्याप्त मात्रामा चाप पैदा भई यौनांग लामो र कडा हुन्छ।
यदि यौनांगमा रगत ल्याउने धमनी राम्ररी खुल्न सकेन भने यौनांग उत्तेजनमा आउनै सक्दैन र मानिस यौन दुर्बलताको शिकार हुन्छ। वृद्ध अवस्थाले छुन थालेपछि यौनांगमा रक्तप्रवाह गर्ने नली(धमनी)पर्याप्त मात्रामा खुल्ला हुन सक्दैन।
भियग्राले यौनांगमा नाइट्रिक अक्साइडको कामलाई बढावा दिन्छ। यसले पुरुष यौनांगको मांसपेशी खुकुलो बनाइदिन्छ। जसका कारण रक्तप्रवाह बढ्न गई यौनांगको कमलो तन्तु बिस्तारै लट्ठीजत्तिकै कडा र दह्रो हुँदै आउँछ अर्थात् उत्तेजना पैदा हुन्छ।
फोक्सोको रक्तचाप बढेमा, उच्च लेकको रोकथाम तथा उपचारमा पनि भियग्राको प्रयोग भइरहेको छ।
यौन दुर्बलता भएकाले यौन सम्पर्क कार्यको आधादेखि चार घण्टाअगाडि बढीमा एक पटक मात्र २५ देखि सय मिलिग्राम भियग्रा सेवन गर्न मिल्छ। एक दिनमा योभन्दा बढी सेवन गरेको खण्डमा नकारात्मक असर देखिन थाल्छ।
धेरैजसोलाई टाउको दुख्ने,तातो अनुभव हुने,नाक रसिलो हुने,आँखा धमिलो हुने,उज्यालोमा हेर्न कठिनाइ हुने,कतिपयले सबै कुरा नीलो देख्नेजस्ता साइड इफेक्ट हुन्छन्। बिरलैलाई मात्र यौनांग निरन्तर रूपमा उत्तेजित भइरहने,रक्तचाप स्वाट्टै घट्ने,हृदयाघात हुने,मस्तिष्कघात हुने,एक्कासि कान नसुन्ने हुन्छ।
उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेका तथा एचआईभीको औषधि सेवन गरिरहेकाले भियग्रा खानु हुँदैन।मुटुको औषधि खाइरहेका,यौन सम्पर्क राखेमा हृदयाघातको जोखिममा रहेका,कडा खालको कलेजो तथा मिर्गौलाका रोगी,हालसालै मस्तिष्कघात तथा हृदयाघात भएका व्यक्तिले भियग्रा सेवन गर्नै हुँदैन।
जानी राखौं : यौन-सपना के हो ? यौन-सपना किन देखिन्छ